Budada Fluoxymesterone (76-43-7) Soosaarayaasha & Shirkadaha - Warshadaha
Daawada Fluoxymesterone (76-43-7) waa hormuudka iyo synthetic, ama hormoon lab ah, oo la mid ah testosterone. Fluoxymesterone wuxuu u shaqeeyaa isagoo isku xiraya xayawaanka iyo xajiinta; Tani waxay keenaysaa in ay dhexgalaan qaybaha unugyada ku lug leh samaynta borotiinka. Waxay keeni kartaa kororka jilicsanaanta borotiinka qaarkood ama hoos u dhigga suubinta dadka kale. Barootinnadani waxay leeyihiin waxyaalo kala duwan, oo ay ka mid yihiin xannibista koritaanka noocyada unugyada kansarka naasaha, kicinta unugyada keena astaamaha galmada, iyo kicinta wax soo saarka unugyada dhiigga cas.
Qalabka Root Fluoxymesterone (76-43-7) video
Macmacaanka Root Fluoxymesterone (76-43-7) Sharaxaad
Budada Dhiigga Fluoxymesterone waa nooc ka sameysan tijaabo, oo ah hoormoon jinsi oo dabiiciga ah oo lagu soo saaro xiniinyaha. Qadar yar oo testosterone ah ayaa sidoo kale lagu soo saaraa ugxan-yada haweenka iyo habka adrenal.
Macdanta "Fluoxymesterone" waxay u shaqeysaa adoo isku xiraya xayawaanka iyo xajiinta; Tani waxay keenaysaa in ay dhexgalaan qaybaha unugyada ku lug leh samaynta borotiinka. Waxay keeni kartaa kororka wax soo saarka borotiinka qaar ka mid ah ama hoos u dhigga soo-saarka dadka kale. Barootinnadani waxay leeyihiin waxyaalo kala duwan, oo ay ka mid yihiin xannibista koritaanka noocyada unugyada kansarka naasaha, kicinta unugyada keena dabeecadaha galmada, iyo dhiirigelinta wax soo saarka unugyada dhiigga cas.
Macmacaanka Root Fluoxymesterone waxaa loo adeegsadaa ragga oo aan ku filneyn walxo dabiici ah oo loo yaqaan 'testosterone'. Ragga, testosterone waxay mas'uul ka tahay hawlo badan oo caadi ah, oo ay ka mid yihiin korniinka iyo horumarka xubnaha taranka, muruqyada, iyo lafaha. Waxay sidoo kale ka caawisaa inay horumariyaan galmada caadiga ah (baaluq) ee wiilasha. Kiniiniga Fluoxymesterone wuxuu la mid yahay baaritaanka dabiiciga ah ee uu soo saaray jidhkaaga. Waxay ka tirsan tahay fasalka daroogada oo loo yaqaan asrogens. Waxay u shaqeysaa iyada oo saameeysa habab badan oo jirka ah si jidhku u kobciyo oo u shaqeeyo si caadi ah.
Macdanta Root Fluoxymesterone ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa wiilasha qaangaarka ah si ay u keenaan qaangaadhnimada kuwa leh qaan-gooyo daahitaan.
Budada Dhiigga Fluoxymesterone (76-43-7) Smamnuucista
Product Name Biyaha budada ah ee "Fluoxymesterone"
Magaca Kiimikada Fluoximesterone; Fluoxymestrone; Halotestin; Androfluorene
Fasalka Daroogada Androgens.
Molecular Wsideed 336.447 g / mol
barafku Psaliid 265 ° C
Biological Life-Life 9.2hours
milmi H2O: ≤0.5 mg / mL
kaydinta Temperature Macluumaad lama heli karo
Application 1. loo isticmaalo ragga oo aan ku filneyn walxo dabiici ah oo loo yaqaan 'testosterone'.
2. waxay gacan ka geysataa inay sameeyaan horumarinta galmada caadiga ah (qaangaarka) wiilasha.
WKoofiyadu waa budada Rood Fluoxymesterone (76-43-7)?
Sidoo kale loo yaqaan 'Fluoxymesterone' budada, budada Halotestin waa steroid anabolic anroly, oo laga qaadan karo hadal hadal ah oo jirka ah si loogu dhiirigeliyo xajmiga murqaha. Waxay ka kooban tahay saddex qaybood - 2mg, 5mg iyo 10mg - waxayna ka kooban yihiin waxyaabo aan firfircooneyn oo ay ka mid yihiin calcium stearate, starch, galley, sorbic acid iyo tragacanth (si loogu magacaabo dhowr).
Astaantani waxay la mid tahay testosterone taas oo dabiiciyan ku dhaca jidhkaaga, sidaa daraadeed waxay u egtahay mid aan la yaabin in badanaa loo isticmaalo ragga aan keenin testosterone dabiici ah oo ku filan (ama wiilasha da'da yar ee qaba qaangaarka daahsoon). Marka la isticmaalo budada Halotestin, waxay kaa caawin kartaa muruqyadaada, lafaha iyo nidaamka taranka si ay u noqdaan kuwo caafimaad qaba, iyo sidoo kale ka hortagga dhibaatada murqaha.
Sidee budada loo yaqaan 'Fluoxidesterone' (76-43-7) shuqullada
Hormoonada waa kiimikooyin kiimiko ah oo ay soo saaraan qanjidhada jidhka, kuwaas oo galaya dhiigga waxayna saameyn ku yeelataa unugyada kale. Isticmaalka daaweynta hoormoonka ee lagu daaweeyo kansarka waxay ku saleysan tahay fiirinta xayiraadaha hormoono gaar ah oo loogu baahan yahay kobaca unugyada ayaa ku yaal dusha sare ee unugyada kansarka qaarkood. Hormoonku wuxuu ka shaqeyn karaa joojinta wax soo saarka hormoon gaar ah, xannibaya hormoonnada hormoonka, ama beddelidda walxaha khatarta ah ee hormoonka firfircoon, oo aan loo isticmaali karin unugyada tumo. Noocyada kala duwan ee daaweynta hoormoonka waxaa lagu sifeeyey shaqadooda iyo / ama nooca hoormoonka la sameeyey.
Budada Fluoxymesterone waxaa loo kala saaraa sida korriinka. Androgens waa hoormoono sida testosterone iyo androsterone in soo saaro ama kiciyo horumarinta sifooyinka lab ah. Dumarka, hormoonkaas ayaa loo bedeli karaa estrogen. Androgens sida daaweynta kansarka waxaa loo isticmaalaa in laga soo horjeedo hawsha oogada, taasina waxay yareeysaa koritaanka kansarka.
Dufanka Faytamiin Laydhka ah (76-43-7)
Qiyaasta qiyaasta waxay ku kala duwanaan doontaa iyadoo ku xiran shakhsiga, xaaladda la daaweynayo, iyo darnaanta. Wadarta qiyaasta afka ah ee qiyaasta ah ayaa la siin karaa si khaas ah ama qaybin (seddex ama afar) dose.
Labeenta hypogonadism: Isbedel dhammaystiran ee labka ah hypogonadal, qiyaasta maalinlaha ah ee 5 ee 20 mg ayaa ku filan inta badan bukaanada. Waxaa badanaa la doorbidaa in lagu bilaabo daaweyn la qaato qaddar daaweyn oo buuxa oo dib loo habeynayo shuruudaha shakhsi ahaaneed. Priapism waa calaamad muujinaysa qiyaasta xad-dhaafka ah waxayna calaamad u tahay in si ku meelgaar ah looga tago daroogada.
Qadarin la daahfuray: Qiyaasta waa in si taxadir leh loo isticmaalo titrated iyadoo la adeegsanayo qadar yar, kormeerka miyir-beelka ku habboon, iyo iyadoo la xaddidayo muddada daaweynta illaa afar illaa lix bilood.
Kansarka aan la shaqayn karin ee haweenka: Dumarka wadajirka ah ee loo qaato daaweynta palliative ee kiniiniga horay ugu shaqeeya ee naasku waa 10 oo ah 40 mg. Sababtoo ah ficilkeedu gaaban yahay, fluoxymeroneone waa in loo maamulaa bukaannada kala qaybsan, halkii laga qaadan lahaa qiyaasta hal maalin, si loo xaqiijiyo heerarka dhiigga oo deggan. Guud ahaan, waxay u muuqataa inay lagama maarmaan tahay in la sii wado daaweynta ugu yaraan hal bil ah si loogu jawaabo jawaabo shakhsi ahaaneed, iyo laba illaa saddex bilood oo ah jawaab ujeedo.
Budada Dhiigga Fluoxymesterone (76-43-7) isticmaalka
Dawadani waxa loo adeegsadaa ragga aan ku filneyn walxo dabiici ah oo loo yaqaan 'testosterone'. Ragga, testosterone waxay mas'uul ka tahay hawlo badan oo caadi ah, oo ay ka mid yihiin korniinka iyo horumarka xubnaha taranka, muruqyada, iyo lafaha. Waxay sidoo kale ka caawisaa inay horumariyaan galmada caadiga ah (baaluq) ee wiilasha. Kiniiniga Fluoxymesterone wuxuu la mid yahay baaritaanka dabiiciga ah ee uu soo saaray jidhkaaga. Waxay ka tirsan tahay fasalka daroogada oo loo yaqaan asrogens. Waxay u shaqeysaa iyada oo saameeysa habab badan oo jirka ah si jidhku u kobciyo oo u shaqeeyo si caadi ah.
Fluoxymesterone waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa wiilasha qaangaarka ah si ay u keenaan qaangaadhnimada kuwa leh qaangaarka daahsoon.
Soo iibso budada Fluoxymesterone laga bilaabo Buyaas.com